Ihe Nikhil Raj dere na Martech Zone
Edemede site na Nikhil Raj
N’oge na-adịbeghị anya, m na-eme nnwale nke Google Search Engine Results. Achọrọ m okwu ahụ WordPress. Nsonaazụ maka WordPress.org dọtara uche m. Google depụtara WordPress na nkọwa Semantic Personal Publishing Platform: Rịba ama snippet nke Google nyere. Odighi ederede a na WordPress.org. N'ezie, saịtị ahụ enyeghị nkọwa meta ma ọlị! Kedu otu Google si họrọ ederede bara uru? Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ chọtara nkọwa site na otu
Tuesday, January 15, 2013 Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Nikhil Raj
Anyị kpughere ihe iseokwu ọzọ ụnyaahụ mgbe anyị na-enyocha ọrụ njikwa ngwa ọrụ nke ndị ahịa anyị. Ebufere m ma nyochaa echiche ma pịa data sitere na Google Search Console Tools ma chọpụta na enweghị ọnụọgụ dị ala, naanị zeros na ọnụ ọgụgụ buru ibu. N'ezie, ọ bụrụ na ị kwenye na Google Webmasters data, naanị nnukwu okwu ndị na-anya n'okporo ụzọ bụ aha akara na usoro asọmpi dị elu nke onye ahịa ahụ họọrọ. Enwere nsogbu, n'agbanyeghị.
Njikwa Nchọgharị Nchọpụta maka weebụsaịtị mba ụwa abụwo isiokwu dị mgbagwoju anya. Ga-ahụ ọtụtụ ndụmọdụ na ntanetị mana ịkwesighi itinye usoro ọ bụla ị nụrụ. Wepụta oge iji chọpụta ihe ndị ị hụrụ n’ onlinentanet. Ọ bụ ezie na ọkachamara nwere ike ide ya, ọ pụtaghị na ha ziri ezi. Dị ka ihe atụ, Hubspot wepụtara akwụkwọ ntanetị ọhụụ 50 SEO & Weebụsaịtị maka International Marketer. Anyị bụ ndị na-akwado Hubspot na ụlọ ọrụ anyị